Tsy tokony idiran'ny frantsay
2007-05-16 @ 15:14 in Politika
Efa saiky omaly moa izy ity no navoakako saingy ninia nihaino ny hevitry ny hafa ihany koa aho aloha. Efa hitan’ny rehetra satria natao lohatenim-baovao sy ngeza tokoa teo amin’ny pejy voalohany ny alahelon’ny fitondrana frantsay nanoloana ny fandroahana ilay mompera Zezoita hiala teto Madagasikara. Nanaitra ny hambom-pon’ny maro teto antanindrazana ilay filazana ofisialy nataon’ny minisiteran’ny raharaham-bahiny frantsay.
Raha nieritreritra ny mpanao gazety nametraka ny vaovaony ho tena matoany dia hafa dia hafa kosa ny nandraisan’ny mpamaky ilay vaovao. Ny mpanao gazety no mety hanao hoe hanimba ny fifandraisana amin’ny roa tonta io ary matoa ny frantsay miteny tahaka izay dia tena zavatra tsy rariny ilay fanapahan-kevitry ny fitondram-panjakana malagasy. Toy ny nametraka moa ry zareo fa noho ny famoahan-kevitra nataon’ilay teratany frantsay no nahatonga ny fandroahana azy. Eo dia tahaka ny hoe mahazo miteny sy mitsikera ny ataon’ny eto nefa mipetraka eto an-toerana ny teratany vahiny.
Ny mpanara-baovao kosa dia nametraka avy hatrany fa raha fandroahana amin’ny mahamisionera azy no natao taminy dia ny any Vatikana aza no tokony hiteny sy hilaza ny alahelony ary hanontany ny antony fa tsy ny frantsay na oviana na oviana. Ny hitory ny evanjely no tokony andehanany aty fa tsy ny hitsabaka amin’ny raharaha politika malagasy afa-tsy hoe mangataka izany ny manam-pahefana eto an-toerana. Vatikana araka ny heviny (izaho moa protestanta ka tsy tena mahalala ny ba sy bi…ny) no naniraka io olona io ho tonga teto Madagasikara. Tsy i Frantsa no tokony haneho ampahibemaso tahaka izao ny heviny manoloana ity raharaha ity.
Ny tsara marihana dia izao : tampoka no nandefasana ilay teratany frantsay ka azo eritreretina ihany fa noho ny hamehana sy zavatra tampoka izany no nandefasana ilay olona. Tamin’ny nandefasana ny mpiambina manokana ny filoha (JMK) iny dia ny laza fa nandona olona teny Talatamaty ny soavaliviny no nisy ihany koa fahatratrarana karazana soavalivy mitovy amin’ny azy teny amin’ireo olona mpaka takalon’aina nalaza tamin’izany fotoana (Lama sy Mahandry). Roa andro raha be indrindra dia tsy maintsy niala ny faritry Madagasikara ranamana raha vao niandoha ny fanadihadiana. Amin’izao fotoana izao moa dia efa mipetraka eto an-tanindrazana indray ranamana io na dia tsy miambina ny filoha aza.
Rehefa tsy nety nolazaina manko ny antony dia tonga daholo izao karazana tsahotsaho rehetra izao. Tsy fantatra intsony izay marina sy tsia fa misy moa ny resaka heno tena ratsy dia ratsy tokoa nefa tsy mendrika ny hosoratana eto izany. Anjaran’ny fitondram-panjakana ny mamoaka izany raha te-hamoaka izy fa angamba metimety kokoa raha mifampitony ny rehetra amin’ny zavatra tsy hahazoam-baliny intsony araka ny fahitako azy hatramin’izao.